यी ६ प्राकृतिक चीज, तपाईको अनुहारको लागि हुनसक्छ, खतरनाक! – Etajakhabar
यी ६ प्राकृतिक चीज, तपाईको अनुहारको लागि हुनसक्छ, खतरनाक!
ताजा खबर:- तपाईलाई हरेक प्राकृतिक चीज अनुहारमा लगाउनका लागि उचित लाग्छ होला तर अनुहारको दाग-धब्बा र डन्डीफोर कम गर्ने यी चीजको प्रयोगले अनुहार बिगार्न पनि सक्छ । कस्मोटोलोजिस्टका अनुसार, यी ६ चीज अनुहारमा लगाउनु हुँदैन ।
अल्कोहल- यदि त्वचा ओयली छ भने तपाई सोच्नुहुन्छ कि अनुहारमा अल्कोहल लगाउँदा त्वचा सुख्खा हुन्छ । तर यसो गर्दा त्वचालाई थप नोक्सान पुग्छ । त्वचाको प्रोटीन र फ्याट कमजोर भई त्वचामा सूजन बढ्न थाल्छ ।
मेयोनेज- अनुहारको दाग-धब्बा कम गर्नको लागि केवल मोइश्चराइजर प्रयोग गर्नुहोस्, मेयोनेजको प्रयोग नगर्नुहोस् । यसको कारण तपाईको डन्डीफोरको समस्या कम हुनुको साटो अझ बढ्छ ।
काँचो अण्डा- अधिकांश मानिसको भनाई अनुसार, अनुहारको दाग कम गर्नु छ भने काँचो अण्डा अनुहारमा लगाउनु पर्दछ । तर काँचो अण्डामा सामोनेला ब्याक्टेरिया हुन्छ र काँचो अण्डा अनुहारमा लगाउँदा गल्तीले पनि पेटमा गएमा तपाईलाई फूड पोयजनिंग हुनसक्छ ।
कागतीको रस- तपाईले अवश्य सुन्नु भएकै होला कि कागतीको रस लगाउँदा डार्क स्पोट र डन्डीफोर कम हुन्छ तर कागती एसिडिक हुन्छ र यसले तपाईको अनुहारको पीएच परिवर्तन गर्छ । जसबाट तपाईको त्वचामा खराब असर पर्नसक्छ र त्वचामा चिलाउने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
बेकिंग सोडा- धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेकिंग सोडा अनुहारको डन्डीफोर कम गर्छ तर अनुहारको लागि बेकिंग सोडा प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा तपाईको अनुहारको पीएच परिवर्तन हुन्छ र तपाईको अनुहारको त्वचामा पोल्ने र चिलाउने हुनसक्छ ।
दालचीनी- अनुहारको समस्या कम गर्नका लागि दालचीनीको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अनुहारमा पोल्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यसलाई अनुहारमा लगाउँदा अनुहारको पीएच परिवर्तन हुन्छ र अनुहारमा असर देखिन थाल्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १६, २०७४ समय: २३:०३:३२
विमानस्थलबाट २० राउण्ड गोलीसहित भारतीय सेनाका कर्नेल बलबहादुर पुन पक्राउ
माइतीघर मण्डलामा सरकारको बिरोध गर्दै युवतीहरुले कपडा खोलेर फाले र गरे अर्धनग्न प्रदर्शन (भिडियो)
ब्रेकिङ : संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको निधन